Model : PR9281800 Product Part: Vanity+Countertop +Mirror Dimensions: Been Abuurka: 1800*550*885、Muraayad: 570*45*1200*2pcs Color: Ash or customized Material: Qoryaha dambaska adag, Marmar dabiici ah, Qalabka DTC. 1. 2 albaabbada jilicsan-xir 2. Two soft-closedrawers 3. Heerarka dhaadheer ee la hagaajin karo 4. Marmar dabiici ah 5. rinjiga deegaanka ku habboon 6. wax aan waxba tarayn 7. Wood frame mirror …
Model : PR886 Product Part: Vanity+Countertop +Mirror Dimensions: Been Abuurka: 1350*600*850、Muraayad: 540*40*1000 Midab: Ash or customized Material: Qoryaha dambaska adag, Marmar dabiici ah, Qalabka DTC. 1. 2 albaabbada jilicsan-xir 2. Laba khaanad qarsoon gudaha 3. Heerarka dhaadheer ee la hagaajin karo 4. Marmar dabiici ah. 5. rinjiga deegaanka ku habboon 6. wax aan waxba tarayn 7. Wood frame…
Model : PR-7281 Product Part: Vanity+Countertop +Mirror Dimensions: Been Abuurka: 800*550*850 Muraayad: 750*130*900 Midab: White or customized Material: Solid Rubber wood, plywood, Marmar dabiici ah, Qalabka DTC. 1. 2albaabbada jilicsan-xir 2. Heerarka dhaadheer ee la hagaajin karo 3. Marmar dabiici ah. 4. rinjiga deegaanka ku habboon 5. wax aan waxba tarayn 6. Wood frame mirrorand vanity Q1: What's the…